I-China Fitness Weight Lifting Foam Avikelayo Ngokwezifiso I-Barbell Squat Beer Pad Umkhiqizi Nomphakeli | NQ
Izinto zeBarbell Pad:
Ikhwalithi ephezulu, eqinile, elula ukuyihlanza, engasindi
pink, obomvu, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka
I-Yoga, uPilatu, iGymnastics, Ezemidlalo njll.,
Yebo / kuyatholakala (usayizi / ukujiya / umbala / ilogo / ukuphrinta / ukupakisha)
Embossing logo, Ukuphrinta logo, njll.,
Izingcezu 100000 Inyanga ngayinye
Le pad barbell ingafakwa kalula futhi isuswe kuyo yonke imigoqo emi-2 `` ejwayelekile yama-Olimpiki neyakwaSmith esebenziseka kakhulu uma ushintshanisa ukuzivocavoca ejimini.
Lesi sipanji se-barbell foam sinemichilo emibili evikela iphedi endaweni ukuze ikusize ugxile kokuzivocavoca umzimba esikhundleni sokukhathazeka ngokushelela kwephedi. Inikeza induduzo enkulu nokuvikelwa kokwakha umzimba, ukuqinisa amandla noma ukusebenzisa i-Crossfit.
1.Each ngamunye ngesikhwama se-opp, bese ufaka esikhwameni. Isethi eyodwa / isikhwama + ibhokisi.
2.Can kube ngokwezifiso logo on band / isikhwama / ibhokisi njll
3.Uma kukhona ukupakisha okukhethekile, ama-pls asithumela nge-imeyili.
Q: Ngingawufaka kanjani umyalo? A: Ungaxhumana nanoma yimuphi umuntu wethu wokuthengisa nge-oda. Sicela unikeze imininingwane yezidingo zakho icace ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke singakuthumela okuhlinzekwayo okokuqala.
Q: Lithini iphakethe lakho?
A: Sizipakisha 1 pc ngaphakathi kwe-1 polybag kanti ezinye zingaphakathi kwebhokisi le-1, kepha futhi singanikela ngesikhwama semesh, isikhwama se-pu nesikhwama eselukiwe.
Q: Ingabe ukunikeza amasampula? ingabe kumahhala noma kuyengeziwe?
A: Yebo, singanikela ngesampula, isampula lokukhokhisa isisekelo samanani amasampula, futhi udinga ukuthi ukhokhe izindleko zempahla.
Q: Imboni yakho ikwenza kanjani ngokuphathelene nokulawulwa kwekhwalithi?
A: Ukuqinisekisa ukuthi ikhasimende lithenga impahla esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo kithi.
Ngaphambi kwe-oda lendawo yamakhasimende, sizothumela amasampula ngamunye kukhasimende ukuze livunyelwe.
Langaphambilini I-Amazon ithengisa kahle i-High Quality Custom Support Belt Pressure Pad, i-Neoprene Adjustable Compression Beer Brace
Olandelayo: Ibhendi ye-TPE yoga yangokwezifiso, Ibhendi lokumelana neRubber Yokuzivocavoca, Ukuqina kokuzivocavoca kweLatex theraband yamahhala
IBarbell Squat Beer Pad
I-Foam Beer Pad
Isitolo esidayisa yonke impahla amanani aphansi ukuqeqeshwa imfanelo ejimini ...
Hot ethengisa Roller Wheel Ukuzivocavoca Izinsiza kusebenza Abd ...
Hot Okuthengisa Imikhiqizo Gym Fitness Training esihlakaleni ...